China n'akuku grinder, mmetụta malite ịgba, hama, li-ion malite ịgba, ike ngwaọrụ ụlọ ọrụ na-emepụta | Boda
Ngwaọrụ ike anyị na - ahụkarị n'ahịa dị n'okpuru:
1. Lithium batrị na-agbanye ọkwọ ụgbọ mmiri / ọkwọ ụgbọ mmiri: nke kwesịrị ekwesị maka ịkụpu oghere na na kposara, ọla, seramiiki na plastik.
2. Rechargeable electric akuakuzinwo adabara mbịne na na kposara. A pụkwara ịme mkpọpu osisi na osisi, ígwè, ceramik na plastik, ma ọ bụ ịkụda mmetụta na brik, ihe na nkume.
3. Ntughari mmiri nwere ike ịdaba na nha nke oke a kapịrị ọnụ, ma nwekwara ike iji ya mee ka mkpụrụ dịkwuo na oke oke.
4. Rechargeable electric hama adabara mmetụta drilling na brik, ihe na nkume. I nwekwara ike dakpuo oghere na osisi, metal, ceramik na plastik. Igwe ahụ nwere njikwa ọsọ elektrọnik na ọrụ ntụgharị / ntụgharị nwere ike ịtọghe / sie ike kposara wee pịa. Kinddị
5. Ngwunye aka eletrik dị mma maka ịkụ ala na plastik, seramiiki, ígwè na osisi. Igwe eji eji eletrik arụ ọrụ na ntụgharị / ọrụ ntụgharị nwekwara ike ibughari ma mechie eri. Kinddị
6. Mmetụta egwu egwu kwesịrị ekwesị maka ịkụ egwu na brik, ihe na nkume. O nwekwara ike igwu oghere n'ime osisi, ígwè, seramiiki na plastik. Elsdị eji ngwa elektrọnik na-achịkwa njikwa yana ọrụ ntụgharị / ntụgharị nwere ike ịtọghe / sie ike kposara wee pịa. Kinddị
7. Hammer malite ịgba nwere ike iji maka ịma jijiji mkpọpu ala na ihe, brik mgbidi na nkume. Mgbe agbanyụrụ egwu vibration, enwere ike iji igwe rụọ olulu na osisi, ígwè, ihe seramiiki na plastik. Igwe akụrụngwa eji ngwa elektrọnik na-achịkwa ngwa na nchara brik na-arụ ọrụ nke ọma / na-adịghị mma nwere ike ịgbanye / kposara ma ọ bụ eriri igwe. Igwe akụrụngwa nwere ọrụ ịcha nwere ike ịrụ ọrụ nhazi. Kinddị
8. Igwe eletrik dị mma maka ịkpụcha ihe na mgbidi, mgbidi brik, nkume na korota. Ọ bụrụ na arụnyere ngwa kwesịrị ekwesị, a ga-ejikwa igwe ahụ iji kpuchie ya na kposara ma ọ bụ zọọ ihe ndị na-adịghị mma. Kinddị
9. Igwe na-efere n’akuku kwesiri maka igbutu, egweri na ahịhịa na-egweri ọla na nkume. A gaghị ekwe ka mmiri mee ihe mgbe a na-arụ ọrụ, a ga-ejikwa efere nduzi mgbe ị na-awa okwute. Maka ụdị eji njikwa kọmputa arụ ọrụ. A na-egweri igwe ma na-egbu maramara ma ọ bụrụ na arụnyere ngwa ndị kwesịrị ekwesị na igwe dị otú ahụ. Kinddị
10. Igwe na-egbu maramara adabara polishing metal na okwute. Kinddị
11. Onye na-egweri ihe kwụ ọtọ (ya na emery wheel arụnyere) adabara egweri igwe ma wepụ burr. Igwe akụrụngwa eji ngwa elektrọnik na-ejikwa ngwa ngwa nwekwara ike ịwụnye ahịhịa, igwe na-agba ọsọ ma na-egweri igwe na igwe na obere ọsọ. Kinddị
12. Onye ọkwọ ụgbọ eletrik kwesịrị ekwesị maka ịgbanye / kposara na mkpọpu ala na osisi, ígwè, seramiiki na plastik. Kinddị
13. Igwe igwe na-ekpu ekpu dabara maka iku oghere. Mgbe ị wụnye ngwa ngwa pụrụ iche, enwere ike ịme ọpịpị ihu. 14. Mmetụta spana adabara ịtụgharị na / si kposara n'ime kpọmkwem size nso, na nwekwara ike ikesiike / esighi ike nke mkpụrụ n'ime kwuru kpọmkwem size nso. Kinddị
15. Ngwongwo eletrik eletrik na-adabara maka ịcha mpempe akwụkwọ, ọ gaghị emepụta ibe. Nwere ike belata akụkụ na akara kwụ ọtọ. Kinddị
16. Nneniki eletriki eletriki / eletriki eletrik na-adaba maka ịcha efere ígwè, na efere ọla ahụ agaghị agbagọ ma gbanwee mgbe ọ gbusịrị. Ọ ga-eji maka ogologo akara ọnwụ, n'ime oghere ọnwụ na warara ekwe n'akuku ọnwụ. Kinddị
17. The diagonal hụrụ nwere ike ji mee ihe na longitudinal ogologo ọnwụ na transverse ogologo ọnwụ. Kinddị
18. Igwe ihe ntughari profaịlụ nwere ike igbutu okwute a n’uwa n’uzo na n’iru na-ejighi mmiri. Kinddị
19. Igwe ihe eji egwu okwute kwesiri maka ntaneti ma obu igbutu na ihe ndi ozo di elu (dika marble). Ọ dị mkpa iji rụọ ọrụ igwe na tebụl kwụsiri ike ma jiri mkpuchi mkpuchi. Enwere ike iji igwe nwere nhazi puru iche maka igbutu mmiri. Enweghi ike iji igwe a igbutu osisi, plastik ma obu igwe. Kinddị
20. Igwe mgbanaka mgbidi
Akwadoro ya na ihe mmịfe ndu, nke dabara maka ịcha ma ọ bụ egwe ọka na ihe nwere nnukwu ọdịnaya (dị ka ihe siri ike, mgbidi brik na paịlị paịl, wdg), na-ejighị mmiri.
21. Curvilinear kwesịrị ekwesị maka igbutu osisi, plastik, metal, seramiiki board na roba na ofu underlay. Ọ nwere ike belata ogologo akara ma ọ bụ bevel n'akuku (na 45 ogo n'akuku).
22. Okwesiri ikwo n’elu uwa na aru oru. Ọ ga-eji na longitudinal na transverse ogologo sawing ma ọ bụ diagonal sawing. Ọnụọgụ kachasị elu nke ịkpụcha akuku bụ ogo 45. Kinddị
23. Igwe gbamgbam latex nwere ike iji igwe a gbue ihe di iche na plasti foamed, roba na ihe ndi ozo. Kinddị
24. Sanders / trimmers / planers dị mma maka akọrọ-egweri osisi, plastik, fillers na-ese na-ebupụta. Igwe ahụ na ọrụ ndozi eletriki nwekwara ike ịrụ ọrụ polishing. Kinddị
25. Enwere ike iji egbe ikuku na-ekpo ọkụ gbagọọ ma ọ bụ ịgbanye plastik, wepụ agba ochie na ikpo ọkụ na-agbada. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya maka ịgbado ọkụ, ihe mkpuchi tin, agbaze mgbaze na ịgbara mmiri mmiri. Kinddị
26. Ihe nchọta mgbidi nwere ike ịchọpụta igwe, waya, osisi na ihe ndị ọzọ. Kinddị
27. Laser rangefinder nwere ike ịlele anya, ebe na olu, na indirect tụọ elu. Kinddị
28. Ngwá ọrụ laser nke ngwá ọrụ a dị mma maka ịtụ ya na ịlele ahịrị kwụ ọtọ.
Ngwa nke n'akuku grinder:
1.Different egweri wheel nwere ike ji mee ihe maka dị iche iche metal egweri, ịcha na mgbochi-ajari;
2.The nkume ọnwụ agụba nwere ike iji hazie tile, nkume, obere osisi na mkpuchi (ọ bụ odi mfe karịa ịcha osisi na n'akuku grinder na obere mma nkwọ);
Enwere ike ịmezi ihe eji emezi igwe site na igbanwe wheel na polishing wheel.
1.Ọ na-pụrụ iche na-egwu ala na ike n'elu, ihe, na nkume, na multifunctional electric hama. Enwere ike iji ya kama iji igwe eletriki eletrik na eletrik eletrik mgbe a gbanwere ya n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị ma kwadebere ya.
Egwuregwu eletriki eletriki: ọ nwere nnukwu ọrụ mmetụta na-emetụta ma bibie ihe, dịka ị na-eji hama na chilulu ịrụ ọrụ, mana arụmọrụ doro anya karịa nke ọrụ aka.
Ihe dị iche na etiti pickaxes na igwe eletrik bụ ihe dị iche nha. Igwe ọkụ ọkụ nwere oke ike nwere ike ịkụpu nnukwu oghere ka a na-akpọ hama hammer, nke yiri nke a. Ihe ngosi abụọ nwere ọrụ nke ntụgharị na hammering.
Enwere ike iji ya mee ihe dị ka igwe ọkụ eletrik nkịtị. E nwere mgbanwe-n'elu mgba ọkụ na ya, nke nwere ike ghọrọ n'ime nkịtị mkpọpu ala na mmetụta egwu.
Ike nke ọkụ eletrik nke 12V dị iche na nke 21V. Ike nke 12V dị obere karịa nke 21V.
1. A na-ekewa agbapụta nke batrị igwe eletriki n'ọtụtụ ọkwa. Ike nke 12V malite ịgba dị na 10C, na ike n'ozuzu gburugburu 5C.
2. Ike dabere na ike nrụpụta, n'ihi na ọkụ eletrik nke 21V dị elu, ọbụlagodi na nke ugbu a ezughi oke, enwere ike ịgbakwunye ya na voltaji, yabụ na anyị agaghị ekwu naanị ma ike ha bụ otu, kamakwa dabere na ikike ha iguzogide voltaji.
BOSENDA na-enye usoro nke ngwa ọrụ ike, ndị ahịa anyị nwere ikike sitere na EU, North America, South America, East Europe, Middle East na South East Asia mba.
Maka ngwaahịa ngwa ọrụ ike, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Nchekwa, ọkụ na-eguzogide igwe, akara mkpisiaka akara mkpọchi, ụdị nchekwa ọ bụla
Osote: Ọdụdọ teepu, combustion na-akwado teepu, ịkwanyere teepu, mkpuchi teepu